7 वरिष्ठ यात्रुहरूको भ्रमण गर्न युरोपमा सर्वश्रेष्ठ शहरहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7वरिष्ठ यात्रुहरूको भ्रमण गर्न युरोपमा सर्वश्रेष्ठ शहरहरू
युरोपको धेरै धनी संस्कृति र इतिहास छ, वरिष्ठ यात्रुहरूका बीच यसलाई लोकप्रिय छुट्टी गन्तव्य बनाउँदै. संग्रहालयहरु, पार्क, प्रभावशाली स्थल चिन्हहरू, र रेस्टुरेन्टहरूको बहुमुखी चयन. छोटकरीमा, यदि तपाईं सेवानिवृत्त हुनुहुन्छ भने त्यहाँ युरोपको कुनै पनि शहरमा आफैलाई लाडका लागि अद्भुत तरिकाहरू छन्. तथापि, धेरै कम शहरहरू नेविगेट गर्न र वरिष्ठ यात्रीहरूको लागि पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ. जब तपाईं युरोपमा आफ्नो बिदाको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, के सबै वरिष्ठ यात्रीले विचार गर्नु पर्ने तपाईको फिटनेसको स्तर हो, को पहुँच प्रमुख आकर्षण र गतिविधिहरु, सबै भन्दा राम्रो यातायात, बजेट र छुट्टी अवधि को अतिरिक्त.
त्यसैले, हामीले वरिष्ठ यात्रुहरूको लागि युरोपमा भ्रमण गर्नका लागि केही उत्तम शहरहरू हातले उठाएका छौं. त्यसैले, तपाईं मा हाम्रो यात्रा अनुसरण गर्न स्वागत छ7यूरोप मा वरिष्ठ मैत्री शहरहरु.
1. वरिष्ठ यात्रुहरूको भ्रमण गर्न युरोपमा सर्वश्रेष्ठ शहरहरू: रोम, इटाली
रोम वरिष्ठ यात्रीहरूको लागि युरोपमा भ्रमण गर्न एक उत्तम शहर हो. पुरानो शहर रोम मा, धेरै आकर्षणहरू, होटल, र रेस्टुरेन्टहरू व्हीलचेयरमा वरिष्ठहरूको लागि पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य छन्. यसको मतलब शहरको फुटपाथ सबैसँग व्हीलचेयरको लागि र्याम्पहरू छन्, र शहर आफै समतल छ, त्यसैले तपाईंको फिटनेस स्तर जस्तोसुकै, तपाईं यसलाई वरिपरि हिंड्न धेरै सजिलो पाउनुहुनेछ.
जबकि रोम उच्च मौसम मा एकदम भीड हुन हुन्छ, यदि तपाईं अफ सीजन यात्रा, गिरावट मा, उदाहरणका लागि, तपाइँ रोम आफैंमा पूर्ण रूपमा पाउनुहुनेछ. साथै, होटल र ट्राभलको मूल्यहरू अफ-सीजनमा झर्छन्, यसबाहेक, तपाईंले कार भाडामा लिने चिन्ता लिनु पर्दैन, किनकि तपाई सजिलै रोम यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ युरोपको कुनै पनि गन्तव्यबाट रेलमा. यस भन्दा बढि सुविधाजनक केहि छैन रेल यात्रा ट्रेनिटालियाको उच्च-गति आधुनिक र उन्नत रेलहरूमा. कम्फर्ट र उत्कृष्ट अन-ट्रेन सेवाको अतिरिक्त, तपाईं वरिष्ठको लागि ट्रेन टिकटहरूमा विशेष छुटको मजा लिन सक्नुहुन्छ.
2. इटाली मा मिलान
डुओमो र लियोनार्डो डि भिन्सीको 'अन्तिम खाजा' मिलानलाई कला र इतिहास प्रेमीहरूको लागि स्वर्ग बनाउँछ. एक वास्तु रत्न हुनु भन्दा पनि पछाडि, मिलान वरिष्ठ यात्रीहरुलाई धेरै अनुकूल छ र एक जीत पनि छ 2016 EU पहुँच पुरस्कार. यसैले मिलान वरिष्ठ पर्यटकहरूको लागि युरोपमा भ्रमण गर्न उत्तम शहरहरू मध्ये एक हो.
यदि तपाईं 60० को पारित गर्नुभयो र सुन्दर जीवनको लागि तयार हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंसँग मिलनमा एकदम अचम्मको समय हुनेछ. को इटालियन भोजन, को आश्चर्यजनक वास्तुकला बेसिलिकास को, आर्ट ग्यालरी, र संग्रहालयहरूले तपाईंलाई शाही महसुस गराउँदछ. जब मिलानो मा, तपाईंले निश्चित रूपमा पास्ता खाना पकाउने कक्षामा सामेल हुनुहुनेछ किनभने सही पास्ता सॉस रेसिपी सिक्न ढिलाइ कहिले हुँदैन त्यसैले तपाईं घर फर्केर ला डोलस भिटालाई पुन: निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ।.
3. वरिष्ठ यात्रुहरूको भ्रमण गर्न युरोपमा सर्वश्रेष्ठ शहरहरू: प्रयोग, बेल्जियम
कोही भन्छन् कि ब्रुगेस युरोपको सब भन्दा राम्रो संरक्षित मध्ययुगीन शहर हो. कोब्बलस्टोन सडकहरू, रंगीन घरहरू, गोथिक वास्तुकला, सबै Bruges वरिष्ठ यात्रा को लागी यूरोप मा एक महान यात्रा गन्तव्य बनाउँछ. यसबाहेक, त्यहाँ नहरहरू छन् जहाँ तपाईं क्रूज लिन सक्नुहुन्छ र ब्रुजलाई प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्न जुन एक चरण बिना नै हो, कुनै पनि वरिष्ठले सराहना गर्दछ एक अनुभव. तर, यदि तपाईं अझै पछाडि शहर पत्ता लगाउन रुचाउनु हुन्छ भने, चिन्ता छैन, Bruges एक धेरै संक्षिप्त शहर हो. त्यसैले, यो कुनै पनि फिटनेस स्तरमा वरिष्ठ यात्रुहरूको लागि उत्तम छ.
तपाईंले कम्तिमा समर्पण गर्नुपर्छ 3-4 दिन भर यात्रा गर्न 80 सहरको नहरहरू र मिन्नेवटर तालमा आराम गर्नुहोस्. ब्रुगेसमा अर्को ठूलो गतिविधि परिवारको लागि केही स्मारिका किनमेलको लागि बजार हो.
Bruges मा केन्द्रीय रेल स्टेशन को बारे मा छ 10-20 मिनेट’ सहरको बीचबाट हिड्दै, त्यसैले तपाईं बेल्जियम र बेलायत जहाँ कहीं यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ.
ब्रसेल्सबाट ब्रुगेस ट्रेन द्वारा
एन्ट्वर्प ट्रेन द्वारा ब्रुगेस
ब्रसेल्सबाट भियना ट्रेन द्वारा
ट्रेन द्वारा Bruges गर्न Ghent
4. बाडेन-बाडेन, जर्मनी
पेरिस देखि ट्रेनहरु संग, बेसल, ज्यूरिख, र म्युनिक, Baden-Baden शहर वरिष्ठ यात्रुहरु को लागी धेरै पहुँच योग्य छ. जबकि यो बर्लिन जस्तो ठूलो विश्वव्यापी शहर होइन, यो सुन्दर जीवनको प्रतीक हो. जर्मनीको घर छ 900 स्पा रिसोर्ट्स, तर Baden-Baden को रिसोर्टहरू र वर्ग ती सबै भन्दा बाहिर.
Baden-Baden मा एक स्पा छुट्टी यूरोप मा वरिष्ठ यात्रीहरुका लागि सही छुट्टी विकल्प हो. शान्त गति, खनिज र माटो स्पा उपचार, प्याराडीजस्ता सुन्दर बगैंचा, स्वर्ग को एक टुक्रा बनाउनुहोस्. तथापि, यदि तपाइँ छुट्टिहरूमा सक्रिय रहन प्रेम गर्नुहुन्छ भने, त्यसो भए त्यहाँ गोल्फ कोर्स र खेल क्लबहरू छन् बाडेन-बाडेन तपाइँ भ्रमण गर्न को लागी.
युरोपका वरिष्ठ यात्रीहरूले प्राय: शहरहरू वरिपरि घुम्न चुनौतीपूर्ण पाउँदछन्, पहाड र बम्पि। सडकहरूको कारण. त्यसैले, यो बुझ्नको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईंको सपनाहरूको शहर तपाईंको शारीरिक क्षमताहरूको लागि उत्तम हो भने. सही यूरोप मा सहि वरिष्ठ मैत्री शहर को यात्रा यात्रा बीमा जत्तिकै महत्वपूर्ण छ. हाम्रो शीर्ष7वरिष्ठ पर्यटकहरूको लागि भ्रमण गर्न शहरहरू वरिष्ठका लागि युरोपमा सबैभन्दा पहुँचयोग्य शहरहरू सुविधा पुर्‍याउँछ.
बर्लिनदेखि Baden-Baden ट्रेन द्वारा
म्यूनिखदेखि Baden-Baden ट्रेन द्वारा
ट्रेन द्वारा ज्यूरिखदेखि Baden-Baden
ट्रेन द्वारा Badl-Baden - Baden लाई
5. वरिष्ठ यात्रुहरूको भ्रमण गर्न युरोपमा सर्वश्रेष्ठ शहरहरू: बर्लिन, जर्मनी
डब्ल्यूडब्ल्यूआईआई र चिसो युद्धसँग सम्बन्धित संग्रहालयहरू र स्थलचिन्हहरू, बर्लिन यूरोप मा वरिष्ठ यात्रीहरु को लागी एक भयानक गन्तव्य बनाउनुहोस्. बर्लिन सपाट र सार्वजनिक यातायात धेरै राम्रो छ, दुबै बस र भूमिगत. यदि तपाईं राम्रो फिटनेस स्तरमा हुनुहुन्छ, तपाईं Segway भ्रमण मा शहर अन्वेषण गर्न सक्नुहुनेछ.
बर्लिनका धेरै हरियो पार्कहरू दिउँसो टहलहरू र पिकनिकका लागि उत्तम छन्, र कला ग्यालरीहरू एक उत्तम विकल्प हो यदि तपाईं व्यस्त केन्द्र भटकने भन्दा बढी शान्त र सांस्कृतिक गतिविधि मन पराउनुहुन्छ.
6. एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
यसको सुरम्य च्यानलहरूका साथ, एम्स्टर्डम सधैं युरोप मा वरिष्ठ यात्रीहरूको लागि एक महान यात्रा गन्तव्य हो. एम्स्टर्डम नेदरल्याण्डमा भ्रमण गर्नका लागि एक उत्तम शहर हो, यसको आरामदायी कम्पन र आकारका लागि धन्यबाद. एम्स्टर्डम अन्य युरोपेली शहरहरूको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा सानो छ, त्यसोभए तपाईंले दौड्न र दर्शनीय स्थलहरूको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन.
यदि तपाईं व्यस्त शहरबाट थकित हुनुभयो भने, सहरको बाहिर प्रसिद्ध मिलहरूमा जानुहोस् वा Tulip क्षेत्रहरू, यदि तपाईं वसन्तमा यात्रा गर्नुहुन्छ. वा यदि तपाईं राम्रो शारीरिक आकारमा हुनुहुन्छ, एउटा बाइक भाँडामा लिदै र आकर्षक शहर वरिपरि बाइक चलाउने एक शानदार विचार हो.
7. वरिष्ठ यात्रुहरूको भ्रमण गर्न युरोपमा सर्वश्रेष्ठ शहरहरू: भियना, अस्ट्रिया
शानदार वास्तुकला, ओपेरा, र शाही दरबारहरूले भियना वरिष्ठ पर्यटकहरूको लागि एक अद्भुत यात्रा गन्तव्य बनाउँदछ. यदि तपाईं जीवनमा चिन्तामुक्त अवधिमा पुग्नुभयो भने जब तपाईं बस पछाडि बस्न सक्नुहुन्छ र कडा परिश्रमको फलहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि भियना तिर लाग्नुहोस्. यसबाहेक, भियना सीमित गतिशीलता संग वरिष्ठ पर्यटकहरु को लागी यूरोप मा दोस्रो सबैभन्दा सुलभ शहर हो.
अस्ट्रियाका कफी घरहरू 'बैठक कोठा' सेवा गर्ने केक र अस्ट्रियन स्किन्त्जेल, ग्यारेन्टी गर्नुहोस् कि तपाईं पक्कै एक अविस्मरणीय पाक अनुभव हुनेछ. यात्राको सांस्कृतिक भागको लागि शोको लागि आश्चर्यजनक ओपेरा हाउस भ्रमण गर्नुहोस्. जे भएपनि, भियना त्यहि हो जहाँ मोजार्ट र शुबर्टले उनीहरूको अभूतपूर्व टुक्रा बनाउँथे, संगीत र कला को शहर.
बेलवेदेर दरबार भियनामा अवश्य अवश्य देखिने ठाउँहरू मध्ये एक हो, फूल बगैंचा र झरना द्वारा घेरिएको, यो पछाडि बस्न र रमाइलो गर्ने ठाउँ हो.
शहरको केन्द्र मात्र छ5केन्द्रीय रेल स्टेशन बाट मिनेट टाढा. त्यसैले, यदि तपाई छिमेकी देशहरु बाट आउँदै हुनुहुन्छ, भियना यात्रा भन्दा सजिलो केहि छैन.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई सस्तो ट्रेन टिकट सौदाहरू र हाम्रो सूचीमा कुनै पनि शहरहरूमा यात्रा मार्गहरू फेला पार्न मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “7 वरिष्ठ यात्रुहरूको भ्रमण गर्न युरोपमा सर्वश्रेष्ठ शहरहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र हामीलाई क्रेडिट दिन सक्छ यो ब्लग पोस्ट गर्न लिंक. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-visit-senior-travelers%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)